Blue Spirulina, Spirulina Powder, Tablet Chlorella - King Dnarmsa
Kiniiniyada Chlorella Dabiiciga ah ee ODM ee OEM ee ODM ...
OEM ODM Shahaadada Organic Spirulina 500 ...
Wax ceeriin ah-Darajada quudinta xoolaha ee Spirulina Powder ...
Qalab ceyriin - Spirulina Blue (Phycocyanin) Sup ...
Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd. waxaa la aasaasay 1995.Waa shirkad farsamo sare leh oo isku dhafan oo leh cilmi baaris iyo horumarin cilmiyeed, cilmi baaris iyo horumarin biotechnology microalgae, beeraha microalgae, alaabta microalgae si qoto dheer u shaqeynta iyo iibinta alaabta guriga iyo dibaddaba. King Dnarmsa wuxuu leeyahay todobo saldhig oo taran oo leh baaxad dhan 1 milyan oo mitir oo laba jibbaaran, machad algae iyo alaab algae - aqoon isweydaarsi qoto dheer.
Wargeysyadayada, macluumaadka ugu dambeeyay ee ku saabsan alaabtayada, wararka iyo dalabyada gaarka ah.
Caafimaadku wuxuu ka yimid dhinac kasta oo tayo leh hufnaanna waxay ka timid kalsooni kasta oo adag. King Dnarmsa wuxuu had iyo jeer taageeraa wadnaha bilowga ah ee meheradda cuntada si qof walba caafimaadkiisa loogu faano.
Beeraheena wax -soo -saarka waxay ka fog yihiin aagga magaalada. Ma jiraan warshado culus iyo beeraha agagaarka beeraha. Sidaa darteed, alaabtayada ayaa ka madax bannaan sunta cayayaanka, geedaha lagu dilo iyo sunta kale.
Sida shirkad tiknoolajiyad sare leh, King Dnarmsa wuxuu aasaasay aag 7,000 mitir oo laba jibbaaran oo algae ah - aqoon -isweydaarsi qoto -dheer oo ka socda Magaalada Fuqing.
Shirkadeena waxaa la aasaasay 1995.
26 sano oo waayo -aragnimo ah.
In ka badan 60 dal iyo gobollo.
Aagga 1 milyan oo mitir murabac.
Waa Maxay Faa'iidooyinka Qaadashada Kalooriyamka Vitamin C ee Chlorella?
Waa Maxay Faa'iidooyinka Qaadashada Kalooriyamka Vitamin C ee Chlorella? Chlorella waa wax fiican.chlorella fitamiin c Mid ahaan, waa kaabis dhan-dabiici ah, oo dhammaystiran oo badbaado leh, waxaana la tusay inay ku siiso faa'iidooyin badan oo wanaagsan caafimaadkaaga. Chlorella, oo ka timaada Closteed -ka badda ...
Kaabis Dhamaystiran - Chlorella Sunfood
Kaabis Dhammeystiran-Sunfood Chlorella Sunfood Challenged Unugyada (SCCs) waa mid cusub oo xiiso leh, aan sun ahayn oo lagu beddeli karo, la warshadeeyay, iyo qashinka gacanta ee sunta ah. ah ...